Ihe bara uru | Eindhoven na Amsterdam | Law & More B.V.
Mgbe ịbinye iwu anyị nkwụchite nke mmasị gị, anyị ga-atụnye nke a na nkwekọrịta ọrụ. Nkwekọrịta a na-akọwa usoro na ọnọdụ anyị tụụrụ gị. Ndị a metụtara ọrụ anyị ga-arụrụ gị, ụgwọ anyị, nkwụghachi mmefu na itinye usoro iwu na ọnọdụ anyị. Na mmezu nke nkwekọrịta ọrụ ekwere, a na-agbaso usoro iwu metụtara, gụnyere iwu ndị Njikọ Netherlands Bar Association.
Mgbe ịbinye iwu anyị nkwụchite nke mmasị gị, anyị ga-atụnye nke a na nkwekọrịta ọrụ. Nkwekọrịta a na-akọwa usoro na ọnọdụ anyị tụụrụ gị. Ndị a metụtara ọrụ anyị ga-arụrụ gị, ụgwọ anyị, nkwụghachi mmefu na itinye usoro iwu na ọnọdụ anyị. Na mmezu nke nkwekọrịta ọrụ ekwere, a na-agbaso usoro iwu metụtara, gụnyere iwu ndị Njikọ Netherlands Bar Association. Onye ọka iwu nke gị na gị na-ezitere ga-arụ ọrụ gị, n ’ụzọ nghọta onye ọka iwu a nwere ike nwee akụkụ akụkụ nke ọrụ ya n’ọrụ ya na nlekọta nke otu ndị ọka iwu ndị ọzọ, ndị ndụmọdụ ma ọ bụ ndị ndụmọdụ. N'ime ime nke a, onye ọka iwu ga-eme ihe dịka enwere ike ịtụ anya onye ọka iwu ruru eru ma nwee ezi uche. N’oge usoro a, onye ọka iwu gị ga-agwa gị banyere mmepe, ọganihu na mgbanwe na ikpe gị. Ọ gwụla ma ekwenyeghi, anyị ga-ekwupụta akwụkwọ ntanetị ka a ga-ekesara gị ozi n'usoro iji rịọ anyị ka i kwenye n'ihe ndị dị na ya.
Inwere onwe gị iji kwụsị ọrụ nkwekọrịta oge enyere gị aka. Anyị ga-ezitere gị nkwupụta ikpeazụ dabere na awa ị nọrọ. Ọ bụrụ na ekweela ego akwụgo ma ọ bido ọrụ, ego a kapịrị ọnụ ma ọ bụ akụkụ ya, ọ dị nwute na agaghị eweghachi.
Firmlọ ọrụ iwu na Eindhoven na Amsterdam
O dabere na ebe enyere ọrụ ego ị ga-eme. Law & More dị njikere ịkọ ma ọ bụ gosi ụgwọ akwụ ụgwọ metụtara ọrụ ahụ tupu oge eruo. Nke a nwere ike ibute mgbe ụfọdụ nkwekọrịta ụgwọ akwụ ụgwọ. Anyị na-eburu ụzọ n'ọnọdụ ego nke ndị ahịa anyị ma na-adị njikere mgbe niile ichebara ndị ahịa anyị echiche. A na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ ọrụ iwu anyị nke ogologo oge ma dabere na kwa awa. Anyị nwere ike ịrịọ maka nkwalite ego na mbido ọrụ ahụ. Nke a bụ ikpuchi ụgwọ mbido mbụ. A ga-egbozi ịkwụ ụgwọ ego a ma emechaa. Ọ bụrụ n ’ọnụ ọgụgụ awa a na-arụ ọrụ erughị nke ụgwọ ịkwụ n’ihu, a ga-agbazigharị akụkụ nke ejibeghi ya tupu ịkwụghachi ego ahụ. Ga-anata nkọwapụta doro anya nke awa a na-arụ na ọrụ emere. Nwere ike jụọ onye ọka iwu gị oge niile maka nkọwa. A na-akọwa ego kwetara na oge awa ahụ na nkwenye ọrụ. Ọ gwụla ma ekwenyeghi, ego ole ekwuru bụ nanị VAT. Inwere ike iji ụgwọ akwụ ụgwọ dịka ụgwọ ndekọ ndekọ ụlọ akwụkwọ, akwụkwọ ego maka kọfị, ihe ndị ọzọ, njem na ebe obibi na ụgwọ mbupu. A ga-akwụ ụgwọ ihe ndị a na-akpọ nkwupụta n’akụkụ iche. N'ọnọdụ na-adịgide karịa otu afọ, enwere ike idozi ọnụego ekwenyero kwa afọ site na iji ndepụta ntụpọ.
Anyị ga-achọ ịrịọ gị ka ị kwụọ ụgwọ onye ọka iwu gị n'ime ụbọchị iri na anọ nke ụbọchị akwụkwọ ọnụahịa. Ọ bụrụ na akwụghị ụgwọ n'oge, anyị nwere ikike (ịkwụsịtụ) ịkwụsịtụ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwụ ọnụ ọnụahịa ahụ n'ime oge a kara aka, biko mee ka anyị mara. Ọ bụrụ na e nwere ezigbo ihe kpatara nke a, a ga-eme ndokwa ọzọ maka ọka iwu ahụ. A ga-edekọ ha na ederede.
Law & More esonyeghi na Iwu Enyemaka Iwu. Ya mere Law & More adịghị enye nkwado iwu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnata enyemaka enyemaka gbasara iwu (“mgbakwunye”), anyị na-atụ aro ka ị kpọtụrụ ụlọ ọrụ iwu ọzọ.
N'ime ọrụ anyị dị ka ụlọ ọrụ iwu na ndụmọdụ gbasara ụtụ isi nke dị na Netherlands, anyị kwesịrị ịgbaso iwu Dutch na European mgbochi ego na mpụ na mpụ (WWFT), nke chọrọ ka anyị nwee ọrụ iji nweta ihe akaebe doro anya nke njirimara onye ahịa anyị, tupu anyị enwee ike ịnye ọrụ ma bido mmekọrịta mmekọrịta. Yabụ, wepụ akwụkwọ sitere na Chamber of Commerce na / ma ọ bụ nkwenye nke otu ma ọ bụ ihe akaebe ziri ezi nke njirimara nwere ike ịrịọ na nke a. I nwere ike ịgụtakwu banyere nke a na Ọrụ KYC.
Aha UBO na Netherlands na 2020
Ntuziaka Europe chọrọ ka ndị otu otu hazie aha UBO. UBO na-anọchite anya onye nwe ụlọ bara uru. A ga-edebanye aha UBO na Netherlands na 2020. Nke a gụnyere na site na 2020 gaa n'ihu, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ iwu kwadoro ka ha deba aha ndị nwe ha (na). Akụkụ nke data nke onwe [
Nkwụghachi ụgwọ nke mmebi na-abụghị ihe…
Gwọ ọ bụla nke ihe ọghọm na-abụghị ihe kpatara ọnwụ ma ọ bụ ihe ọghọm bụ nke iwu obodo Dutch kpuchitere ruo n'oge na-adịbeghị anya. Ndị a na-abụghị ihe onwunwe emebi obosara iru újú nke ezigbo ndị ikwu na-ada site na ihe omume nke ọnwụ ma ọ bụ ihe ọghọm nke onye ha hụrụ n'anya nke ọzọ ọzọ bụ […]
Iwu Dutch maka nchebe nke nzuzo nzuzo
Ndị ọchụnta ego na-ewe ndị ọrụ n’ọrụ, na-ekenye ndị ọrụ a ozi nzuzo. Nke a nwere ike ịkọwa ozi gbasara teknụzụ, dịka uzommeputa ma ọ bụ algorithm, ma ọ bụ ozi na-abụghị ọrụaka, dị ka ntọala ndị ahịa, atụmatụ ahịa ma ọ bụ atụmatụ azụmaahịa. Otú ọ dị, gịnị ga-eme na ozi a mgbe onye ọrụ gị malitere ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị […]
Usoro izugbe na Ọnọdụ
Usoro iwu anyị na ọnọdụ anyị metụtara ọrụ anyị. A ga-ezitere gị ozi ndị a na ọnọdụ ọrụ gị yana nkwekọrịta ọrụ. I nwekwara ike ịchọta ha na Ọnọdụ niile.
Usoro maka Mkpesa
Anyị na-etinye oke mkpa na afọ ojuju nke ndị ahịa anyị. Firmlọ ọrụ anyị ga-eme ike ya niile iji nye gị ọrụ kacha mma. Ọ bụrụ n’anyị enweghị afọ ojuju maka otu akụkụ nke ọrụ anyị, anyị na-arịọ gị ka ime ka anyị mata ngwa ngwa o kwere mee gị na onye ọka iwu gị ikwurita ya. Na mkparịta ụka gị, anyị ga-anwa ịchọta ụzọ ọ ga - esi dozie nsogbu ahụ bilitere. Anyị ga-edotara gị ihe ngwọta a oge niile ede. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịbikọta ọnụ, ụlọ ọrụ anyị nwekwara usoro mkpesa nke ụlọ ọrụ. Inwere ike ịchọta ihe banyere usoro a na Usoro mkpesa ụlọ ọrụ.
Onye Mmekọ / Onye Nkwado
You chọrọ ịma ihe Law & More nwere ike imere gị dịka ụlọ ọrụ iwu na Eindhoven na Amsterdam?